Mitady Eid Ao Anaty Ady Eritreritra Momba Ny Seha-Javakanton’i Eid ao Syria · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Oktobra 2013 5:49 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Français, Nederlands, Italiano, عربي, Ελληνικά, Español, Português, English
Mizara ny fomba fijeriny momba ny Eid Al Adha, mandà ny hankalaza fety raha mbola maro ny iharam-boina sy mitsoa-ponenana noho ny korontana mitohy any aminy ireo manan-talenta sy feo isan-karazany ao Syria.
Etsy ankilany ny fikarohan'ny mpahay mozika Wael Alkak amin'ny hira nentin-drazana Syriana ao amin'ny raki-kirany farany, nampitondrainy ny lohateny hoe “Hiran'ny Eid,” izay naka aingam-panahy tamin'ny sangan'asan'i Tammam Azzam mitondra ny lohateny hoe “Bon Voyage”.
Tsy misy dikany ny seha-javakanton'i Syria raha tsy misy ny fandraisana anjara avy amin'ny vahoaka ao Kafranbel. Misioka ny afisiny farany ny mpisera Twitter Racan:
Na izany aza, misy ny hafatra tafiditra ao anatin'ireo sangan'asa ireo izay azo raisina hoe : Manakenda izay sisa tavela ao amin'ny firenena ny zava-tsarotra sedrain'i Syria ka mila famonjena izy. Manazava ny zavamisy mampihoron-koditra iainan'ny mponina ao Syria ny mpanoratra fanta-daza Amal Hanano, fa ny hena, ohatra, dia efa lafovidy ka tsy taka-bidin'ny maro intsony.
Amin'ny alalan'ny bika, miangavy ny olona hanao fanomezana amin'ny fanatitry ny Eid ho an'i Syria ny Ekipa Multimedian'ny Revolisiona Syriana: